Ny prototype an'ny Apple Watch dia mampiseho mpampitohy an'ny "smart band" | Avy amin'ny mac aho
Ity Apple ity dia mikasa ny hampita ny Apple Watch amin'ny a connector Mba hahafahana mifanerasera amin'ny tadiny, tsy dia lavitra izy io. Tena kely ny vidinao raha mampiditra mpampitohy kely ao anatin'ilay raharaha ianao ary afaka mandefa na mandray angona avy amina karazana tadin-tsaina. Izany dia efa nieritreritra ny andiany 3.
Farafaharatsiny, toa amina prototype tsy fahita firy an'ny Apple Watch Series 3, izay mampiditra mpampitohy kely ao anatin'ny faran'ny tranga misy ny tadin'ny famantaranandro. Hevitra tsara, tsy fantatsika raha mbola ao anaty fantsona io ary amin'ny farany dia hipoitra amin'ny andiany ho avy izy io, na niraikitra tao amin'ilay prototypa izay voaro tamin'ny fanimban'ny orinasa.
Ny zavatra mahazatra amin'ny orinasa rehetra mamolavola ny fitaovany manokana dia izy ireo rava vantany vao vita ilay tetikasa. Mihoatra noho ny zavatra rehetra mba tsy hivoahan'ny hevitra ka amin'ny farany dia tsy ampiasainao izany, fa mety hiafara amin'ny fitaovana mifaninana.
Ary ohatra iray amin'ity fiheverana «fanimbana porofo» ity ny sarin'ny nitranga fahiny fa noho ny antony sasany dia nandositra ny fandringanana izy. Giulio Zompetti, developer sy mpanangona ny prototypes an'ny Apple, dia nanamboatra iray manokana.
Manana sombin-javatra tsy manam-paharoa ao aminao ianao. Prototype iray an'ny Apple Watch Series 3 misy mpampitohy ahafahana mifandray amin'ny karazana tadiny "marani-tsaina". Tena hita, tsy misy isalasalana.
Apple dia mety nanandrana "bandy marani-tsaina" sasany tamin'ny fanitsiana teo aloha an'ny Apple Watch S3.
Amin'ity singa prototype ity dia misy pads tsy mahazatra roa iharan'ny tarika, ho karazana "Smart Connector" izay efa hitantsika tamin'ny iPads.#AppleCollection #AppleWatch pic.twitter.com/uVFZHuvuAe
- Giulio Zompetti (@ 1nsane_dev) Jona 24, 2021
Ny fitaovana dia mampiseho fifandraisana roa vy ao anatin'ny toerana misy ny trano, izay miraikitra ny fehy, amin'ny lafiny roa amin'ny seranan-tsambo. Zompetti mino fa ireo terminal tsy mahazatra roa dia iharan'ny fifandraisana amin'ny tadiny, ary mety ho karazana "Smart Connector"Mitovy amin'ny iPad, hanakalo data miaraka amina karazana tady" hendry ".
Apple dia manana patanty marobe amin'ny tadiny marani-tsaina
Apple dia nahazo loka marobe Patents manodidina ny tarika marani-tsaina ho an'ny Apple Watch, izay manondro fa zavatra efa niasa nandritra ny taona maro ilay orinasa. Ny patanty sasany dia mampiseho hevitra samihafa toy ny fanamarinana biometrika, fanamafisana ny tena na fampidirana ao anaty tadin'ny bateria, efijery, fakan-tsary, sensor amin'ny tosidra, sns.
Ny tsy fantatsika dia hoe io hevitra io ve mijanona anaty vatasarihana aorian'ny fandefasana ny andiany 3, na manohy miasa azy io ny orinasa, ary lasa zava-misy io prototype io amin'ny andiany 7 na 8. Ho avy ny ony, mitondra rano….
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Ny prototype an'ny Apple Watch dia mampiseho mpampitohy an'ny "smart band"